आन्तरिक ग्रहहरू: तिनीहरू के हुन् र मुख्य विशेषताहरू | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब हामी सबै ग्रहहरू बारे चर्चा गर्दछौं जुन सूर्यको वरिपरि अर्बिट हुन्छन् र जुन मेक अप गर्दछ सौर्य प्रणाली, हामी तिनीहरूलाई मा विभाजित भित्री ग्रहहरू र बाहिरी ग्रहहरू। भित्री ग्रहहरू ती हुन् जुन सूर्यको नजिकको भागमा अवस्थित छन्। अर्कोतर्फ, बाह्य मानिसहरु ती टाढा टाढा रहेका हुन्। भित्री ग्रहहरूको समूह बीच हामी निम्न छ: पृथ्वी, मार्टे, भेनस y बुध। बाहिरी ग्रहहरूको समूहमा हामीसँग निम्न छ: स्याटर्न, बृहस्पति, नेप्च्यून y यूरेनस.
यस लेखमा हामी भित्री ग्रहहरूका सबै सुविधाहरू अध्ययन गर्ने कुरामा ध्यान दिन गइरहेका छौं।
1 भित्री ग्रहहरूका विशेषताहरू
2 भित्री ग्रहहरू
भित्री ग्रहहरूका विशेषताहरू
हामीले लेखको सुरूमा भनेझैं, ती ती ग्रहहरूको बारेमा छ जुन सूर्यको नजिकै अवस्थित छन्। यस स्थानलाई सूर्यको साथ साझेदारीको साथसाथै भित्री ग्रहहरूको समूहमा अन्य विशेषताहरू समान छन्। यी सुविधाहरू मध्ये हामी उस्तै आकार, यसको वातावरणको संरचना वा यसको मूलको संरचना फेला पार्दछौं।
हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं भित्री ग्रहहरूको बिभिन्न विशेषताहरू के हुन्। सर्वप्रथम, तिनीहरू आकारमा धेरै सानो हुन्छन् यदि हामी यसलाई बाह्य ग्रहहरूको आकारसँग तुलना गर्छौं। तिनीहरू चट्टानी ग्रहको नामले चिनिन्छ किनभने तिनीहरूको सतह सिलिकेटहरू मिलेर बनेको छ। यी सिलिकेटहरू खनिजहरू हुन् जसले चट्टानहरू बनाउँदछन्। खनिजहरूको यी उच्च सांद्रता द्वारा गठन भएकोले, यो भन्न सकिन्छ कि यी चट्टान ग्रहहरूको उच्च घनत्व छ। घनत्व मान3र g g / सेमी³ बीचमा भिन्न हुन्छ।
भित्री ग्रहहरूको अर्को विशेषता भनेको तिनीहरूको अक्षमा घुमाउनु हो। अन्य ग्रहहरूको विपरीत यसको अक्षमा परिक्रमण धेरै ढिलो छ। ती ग्रहहरूको म Mars्गल र पृथ्वीले आफैंमा घुम्न २ 24 घण्टा लिन्छ शुक्रको २ 243 दिन र बुधको 58 XNUMX दिन हो। त्यो हो, शुक्र र बुध ग्रहको लागि आफ्नो अक्षहरू फर्काउन सक्षम हुन, ती सबै दिनहरू बितिसकेको हुनुपर्दछ।
भित्री ग्रहहरू पनि यसको नामबाट चिनिन्छन् टेलुरिक ग्रहहरू। किनभने यी ग्रहहरूको केन्द्रक पृथ्वी र चट्टानले बनेको छ। केवल वातावरणमा मंगलबार, शुक्र र पृथ्वी छन्। यी ग्रहहरु सूर्य बाट प्राप्त भन्दा कम उर्जा उत्सर्जन द्वारा विशेषता हो। अर्को ग्रह जसद्वारा यी ग्रहहरू चिनिन्छ साना ग्रहहरूको नाम हो। यो नाम सौर्यमण्डलमा अन्तिम ग्रहहरूको विशाल अनुपातको तुलनामा यसको आकारबाट आउँछ।
तिनीहरूसँग समानताहरू छन्, जस्तै समान संरचना र संरचना, केन्द्रीय भाग नाभिक र विभिन्न तहहरू जुन एक ग्रहबाट अर्कोमा अनुपातमा फरक हुन्छ।
यो भित्री ग्रहहरूको सूचीमा पहिलो हो। यो किनभने सम्पूर्ण सौर्य प्रणालीमा हुनु सबैभन्दा नजिकको ग्रह हो। यो सूर्यबाट करिब 0.39. XNUMX ast खगोलीय एकाईहरूको दूरीमा अवस्थित छ। सूर्यको धेरै नजिक भएको र ठूलो मात्रामा उर्जा प्राप्त गर्दा, यसको वातावरणको अभाव छ। यसले यस ग्रहको सतह तापमान दिनको अवधिमा धेरै र रातमा पनि कम बनाउँछ। दिनमा during430० डिग्री र रातमा -१180० डिग्री तापक्रम देख्न सकिन्छ। जस्तो तपाईले अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, तापक्रम सम्बद्धतामा यो दायराको साथ, यस ग्रहमा जीवन छ भन्ने तथ्य लगभग निन्दनीय छ।
बुधको एउटा विशेषता यो छ कि यसमा भित्री ग्रहहरू भित्र सब भन्दा अधिक घनत्व छ। यसको कोर उच्च घनत्व फलामले बनेको छ र यसको कोरले ग्रहको सम्पूर्ण द्रव्यमानको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसको कुनै उपग्रह छैन यसको वरिपरि घुम्दैछ र एउटा पक्ष जसले यसलाई रमाईलो बनाउँदछ क्रेटरहरू र प्वालहरूको मात्रा जुन यसको सतह छ। यी क्रेटरहरू गठन गरिएको छ वस्तुको मात्राका कारण यो टकराउँदछ किनकि यससँग कुनै सुरक्षा छैन किनकि यसको वातावरण छैन। गठन गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्वालहरू मध्ये १ diameter०० किलोमिटर व्यास रहेको छ र यसलाई प्लेटिना क्यालोरीस भनिन्छ। यो ठ्याक्कै राम्रोसँग थाहा छैन, यस्तो सोचाइ छ कि यो ज्वालामुखी मैदान हुन सक्छ।
यो सूर्यको नजिक हुनेहरूको समूह भित्र दोस्रो ग्रह हो। यो सूर्यबाट ०.0.72२ खगोलीय एकाईहरूको दूरीमा अवस्थित छ। यसको घनत्व र अनुमानित व्यास पृथ्वीको नजिक छ। बुध भन्दा फरक, शुक्रसँग वातावरण छ। यो मुख्यतया कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन र अन्य ग्यासहरू जस्तै हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेर बनेको हुन्छ।
स्थिर र स्थिर क्लाउड कभर देख्न सकिन्छ। यी सुविधाहरू यसको वातावरणको कारणले यो एक ग्रह हो 460 डिग्री माथि तापमान संग धेरै तातो। यसको वातावरणीय दबाव pressure to देखि २०० एचपीए बीचको मानको वरिपरि हो। विगतमा यसमा तरल पानी भएको हुन सक्छ भन्ने सोचाइ छ, तर त्यो विचार आज खारेज गरिएको छ। यस ग्रहको एक उत्सुकता यो हो कि यसको अनुवादिक चाल घुम्ने भन्दा छोटो छ।
यस ग्रहको बारेमा धेरै कुरा गर्न कि हामी पहिले देखि नै थाहा छैन। यद्यपि हामी सुविधाहरूको केही समीक्षा गर्न जाँदैछौं। यो सूर्यबाट १ खगोलीय एकाईमा अवस्थित छ। यसमा चन्द्रमा भनेर चिनिने उपग्रह रहेको छ। को कभर पृथ्वीको सतह% 76% पानीले बनेको छ। यो एक प्रशंसायोग्य तीव्रता संग एक चुंबकीय क्षेत्र छ। यो एक मात्र यस्तो ग्रह हो जहाँ जीवन एक आत्म-प्रजनन, अनुकूली, चयापचय क्षमता र वरपरको वातावरणबाट ऊर्जा लिन सक्षम छ भनेर चिनिन्छ।
यो उच्च अनुपात र अक्सिजन मा नाइट्रोजन बाट बनेको वातावरण छ। सानो अनुपातमा हामी अन्य ग्यासहरू फेला पार्दछौं जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, पानी वाष्प, आर्गन र धुलो कणहरू निलम्बनमा। २ rot घण्टामा रोटेशन बराबर हुन्छ र अनुवादले 24 365 दिन लिन सक्दछ।
यो भित्री ग्रहहरूको समूहको अन्तिम हो। तिनीहरू सूर्यबाट १.२२ खगोलीय एकाईहरूको दूरीमा छन्। यसको रातो रंग छ र त्यसैले रातो ग्रह पनि भनिन्छ। घुमाउने अवधि २ hours घण्टा 24० मिनेट हो, जबकि सूर्य वरपरको अनुवादले यसलाई 40 687 दिनमा चलाउँछ। यो वातावरण हामी देख्छौं कि यो मुख्यतया कार्बन डाइअक्साइडबाट बनेको छ, र सानो अनुपातमा पानी, कार्बन मोनोअक्साइड, अक्सिजन, नाइट्रोजन र आर्गनमा।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं भित्री ग्रहहरू र उनीहरूको मुख्य विशेषताहरूको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » भित्री ग्रहहरू